UMgangatho weMigangatho Ukuqhathaniswa kokufakwa kwiiKholeji zase-Alabama
Ukuqhathaniswa koLwesibini ngeCandelo le-ACT Imvume ye-Admissions ye-20 iikholeji zase-Alabama
Ingaba unemiThetho emanqaku oyifunayo ukuba ungene kwiikholeji zakho zase-Alabama kunye neeyunivesithi ezizithandayo? Itheyibhile elandeleleneyo ngokubhekiselele ngezantsi yenza iziphumo zoMTHETHO kwi-50% yabafundi ababhalisile. Ukuba izikolo zakho ziwela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwelinye leekholeji ezingama-20 zase-Alabama.
Khetha UMthetho weeKholeji zeAlabama izikolo (phakathi kwe-50%)
I-Alabama A & M Yunivesithi 16 19 14 20 15 18
YaseAlabama State University 15 19 14 19 15 17
University of Auburn 24 30 25 32 23 28
IYunivesithi yeFaulkner 18 23 16 24 16 22
Ikholeji yaseHuntingdon 19 23 18 24 16 22
KwiYunivesithi yaseJordan 20 26 20 28 18 25
University of Oakwood 16 21 15 22 15 21
University of Samford 23 29 24 31 21 27
KwiYunivesithi yaseTroy 18 24 17 25 16 23
Yunivesithi yaseTuskegee 21 22 18 22 18 22
Yunivesithi yaseAlabama eBirmingham 21 28 22 30 19 26
IYunivesithi yaseAlabama eHuntsville 25 31 24 33 23 29
IYunivesithi yase-Alabama Main Campus 23 31 23 33 22 29
KwiYunivesithi yeSelula 19 25 18 25 17 23
Yunivesithi yaseMontvallo 20 26 21 28 18 25
KwiYunivesithi yaseNorth Alabama 19 25 19 26 17 24
Yunivesithi yaseMzantsi Alabama 20 23 21 28 18 26
KwiYunivesithi yaseWest Alabama 18 23 17 23 16 22
Uluhlu olulapha ngentla lubandakanya iikholeji eziphezulu ezi- 9 zase-Alabama . Qhubeka ukhumbule ukuba ama-25% abafundi ababhalisile baye bahlawula ngaphantsi kwabo babalwe. Kwakhona, khumbula ukuba ii-ACT izikolo ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa avumelekileyo kwiiikholeji ezininzi zaseAlabama nazo ziya kufuna ukubona irekhodi eliqinileyo lemfundo , isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi enentsingiselo yexesha elichanekileyo kunye neencwadi ezilungileyo zinconywa . Ngoko, kwezinye izikolo, umfundi onamazinga aphezulu kodwa isicelo esinamandla asivumelekanga, ngelixa umfundi ephethe amanqaku aphantsi kodwa isicelo esomeleleyo singamkelwa.
Cofa kwigama lezikolo kwiikwere ezingasentla ukujonga iphrofayili yayo - igcwaliswe ngolwazi olongezelelweyo lwamkelwa, idatha yenkxaso yezemali, izibalo zemfundo kunye nokubhalisa, kunye nolwazi olungakumbi. Ezinye izikolo zinegrafu ye-GPA-SAT-ACT ebonisa indlela abanye abafaki zicelo abaye bafumana ngayo izicelo zabo esikolweni; nokuba ngaba babemkelwe, bafundwa, okanye banqatshelwe, kunye nawaphi amabanga abo / amanqaku okuvavanya afana nawo.
IQumrhu leMFETHO Ukuqhathaniswa nokwamkelwa kwiiKholeji zase-Indiana
Ukuphucula umThetho wovavanyo lokuBhala
Ngaba UThixo Uyamthiya Abantu Abesini Engqingili?
Ukulondolozwa kweNkcenkcesho: Ezinye iindlela eziya kuGrass
Iingcaphuno zokukhuthaza abantwana
Ukudlala Iibhonasi zeBhonjack zeBhonasi
Yintoni ukuhlonipha eBallet?